Xil ka qaadista Trump: Maxaa ku dhaca marka madaxweyneyaasha laga gudbiyo xil ka qaadista? - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
January 14, 2021 at 15:08 Xil ka qaadista Trump: Maxaa ku dhaca marka madaxweyneyaasha laga gudbiyo xil ka qaadista?2021-01-14T15:08:09+02:00 WARARKA SOOMAALIYA
Sanadkii 1869, Dimuqraaddiyiinta ayaa lumiyay awooddii Aqalka Cad iyadoo uu kala wareegay musharraxii Jamhuuriga Janaraal Ulysses S Grant, oo oggolaaday inuu sii socdo qorshihii xisbigiisa ee dib u dhiska.
Codkaas oo cajalad ku duubnaa ayaa soo afjaray wixii uu Nixon isku dayay inuu daaha saaro.
Taariikhdu markay ahayd 8-ddii August, 1974, Nixon ayaa is casilay. Wuxuu noqonayaa madaxweynihii keliya ee Mareykanka ee sidaas sameeya.
Baaritaankii ku lug lahaanshaha hanti guryo ah wuxuu sii ballaartay bishii January 1998 waxaana lagu soo daray xiriirkii jaceyl ee uu madaxweynuhu la lahaa gabar Aqalka Cad ka shaqeyn jirtay oo lagu magacaabo Monica Lewinsky.
Iyadoo ay qeyb ka ahayd dacwad kale oo madaxweynaha lagu soo oogay – oo ahayd tacaddi jinsi oo uu kula kacay Paula Jones – Mr Clinton waxaa wax laga weydiiyay xiriirkii uu la lahaa Ms Lewinsky. Dhaarin dhacday 17-kii January ayuu Mr Clinton ku beeniyay inuu gabadhaas xiriir la lahaa.
Marka la eego codadkii sare ee uu ku helay qiimeynta waxaa la sheegay inaysan sumcaddiisa aad u dhaawicin sida labadii madaxweyne ee ka horreeyay.
« Puntland oo guddi Nabadayn ah u dirtay Miyiga degmada Isku-shuban
Wasiirkii hore ee Arrimaha Bulshada Puntland oo geeriyooday »